Burmese Blog Archives - Aung Hein The Blogger
Posted by aunghein — August 18, 2019 in Burmese Blog
အခုအခါမှာ Google AdSense ကို မြန်မာဘာသာနဲ့ အသုံးပြုထားတဲ့ website တွေမှာလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ တရားဝင် Google က ခွင့်ပြုထားတာမဟုတ်ပေမယ့် သုံးနေကြတဲ့ website တော်တော်များများရှိနေပါပြီ။ Risk တော့ယူရပါတယ်။ အခန့် မသင့်ရင်တော့ Ads account disabled ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုဖို့ အတွက် AdSense code မှာ အနည်းငယ်ပြုပြင်ပေးရပါတယ်။ အကယ်လို့ များ အဆိုပါ AdSense cod ပြုပြင်နည်းကို သိချင်ပါက [email protected]…
Posted by aunghein — January 20, 2019 in Burmese Blog
Search Engine တွေကလာတဲ့ Traffic (organic traffic) တွေက social traffic တွေထက်ပိုပြီး အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ website က ၀န်ဆောင်မှု (သို့ ) ဈေးရောင်းတဲ့ website မျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာပိုပြီးသိသာပါတယ်။ ဒီ website တွေသာမကပဲ information ပေးတဲ့ blog တွေအတွက်လည်း သိသာပါတယ်။ Organic traffic ဆိုတာက လူတစ်ယောက်က Search Engine (google ပဲဆိုကြပါစို့ ) မှာ အချက်အလက်တစ်ခုကို ရှာလိုက်ပြီး Google က ပြလိုက်တဲ့ website တွေကို ၀င်ကြည့်ရာက ကိုယ့်…
Posted by aunghein — January 18, 2019 in Burmese Blog
SEO စစလေ့လာတဲ့သူတွေ မှားတတ်တဲ့ အရာတစ်ခုက EMD လို့ ခေါ်တဲ့ Exact Match Domain ပါ။ Exact Match Domain ဆိုတာ ဘာကိုခေါ်လဲဆိုတော့ အရှာများတဲ့ Keywords တွေနဲ့ တစ်ထပ်တည်းကျတဲ့ domain နာမည်တွေပါ။ ဥပမာ cheapmobilephone.com, makingmoneyonline.com ဆိုတာမျိုးတွေပေ့ါ။ 2012 မတိုင်ခင်ကတော့ Exact Match Domain တွေက တော်တော်အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Blackhat SEO သမားတွေဆိုရင် website ranking တက်ဖို့ exact match domain တွေပဲ ၀ယ်ပြီး ranking…
Posted by aunghein — January 15, 2019 in Burmese Blog
အရင်တစ်ခါ ရေးခဲ့တဲ့ Keywords ဆိုတာဘာလဲ ဆိုတာရဲ့အဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဆောင်းပါးကိုမဖတ်ရသေးရင် ဒီမှာဖတ်နိုင်ပါတယ်။ Read: What are the keywords in SEO? အဲ့ဒီ post မှာ နောက်ဆုံးပြီးသွားတဲ့နေရာက ကိုယ့် website အတွက် keywords တွေစဉ်းစားပြီးတော့ keywords 20 လောက်အကြမ်းဖျဉ်းထွက်လာပြီဆိုပါစို့ ။ အဲ့ဒီ keywords တွေကို တန်းသုံးလို့ မရသေးပါဘူး..အဲ့ဒီ keywords တွေထဲကမှ ထပ်ပြီးရွေးချယ်ရမှာပါ။ ဘယ်အရာတွေပေါ်မူတည်ပြီးရွေးချယ်မှာလဲ။ Search Volume Keywords စဉ်းစားတုန်းက ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတွေကို အကြမ်းဖျဉ်းစဉ်းစားလိုက်မိတာတွေပါမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ keywords က…
SEO မှာ Keywords ဆိုတာဘာလဲ (အပိုင်း ၁)
Posted by aunghein — December 30, 2018 in Burmese Blog
Website တစ်ခုကို SEO စပြီး apply လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် Keywords ဆိုတာအရေးကြီးလာပါတယ်။ Keywords ရွေးချယ်ထားခြင်းမရှိပဲ SEO လုပ်နေတယ်ဆိုတာ ဦးတည်ရာမရှိပဲ လျှောက်သွားနေတဲ့လူလို ပါပဲ။ Keywords ဆိုတာဘာလဲဆိုတာ မေးစရာရှိလာပါတယ်။ Keywords ဆိုတာက Search Engine မှာ လူတွေက အချက်အလက်တွေရှာတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ စကားလုံး (သို့ ) စကားစုတွေပါ။ ဥပမာ ပုဂံကို သွားမယ်လို့ စဉ်းစားရင် ပုဂံအကြောင်း google မှာ ရှာမယ်ဆိုပါစို့ ။ ဘယ်လို Keywords တွေသုံးပြီးရှာကြမလဲ။ Hotels in Bagan ဆိုတာရှာမယ်။…
Posted by aunghein — December 27, 2018 in Burmese Blog
ကျွန်တော် SEO ကုိုစတင်ပြီး စနစ်တကျလုပ်ဖြစ်တာက ၂၀၁၈ မတ်လမှာပါ။ အဲ့ဒါမတိုင်ခင်က နည်းနည်းလေ့လာလိုက်…ပစ်ထားလိုက်နဲ့စနစ်တကျမရှိခဲ့ပါဘူး။ အခုတစ်ကြိမ်မှသာ သေချာစနစ်တကျနဲ့ စိတ်ပါနှစ်ပြီးလေ့လာဖြစ်တာပါ။ အဲ့ဒီလိုလေ့လာဖြစ်ဖို့ ကလည်း motivation factor ရယ်၊အချိန်ရယ်၊ လေ့လာနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးတွေရယ်လိုအပ်ပါတယ်။ Motivation factor ကတော့ လူပေါ်မှာမူတည်ပါမယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူနိုင်ပါဘူး…အချို့ကတော့လည်း Digital Marketing field မှာ နေရာကောင်းကောင်းရဖို့ ၊ သင်တန်းတွေပေးနုိုင်ဖို့ အစရှိသဖြင့် motivation factor တွေရှိမှာပါ။ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ SEO ကို သုံးပြီး passive income stream တွေ ဖန်တီးဖို့ ပါပဲ။ အဲ့လို ဖန်တီးနိုင်တဲ့…
Passive Income stream တစ်ခုရှိချင်ရင် Blog ရေးပါ
Posted by aunghein — September 25, 2018 in Burmese Blog
Passive Income Stream လို့ ပြောလိုက်ရင် MLM ကိုပြေးမြင်ချင်ပါတယ်။ MLM တွေ သုံးပြီး စည်းရုံးလို့ အရမ်းကောင်းတဲ့စကားတစ်ခုပေ့ါ။ အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ MLM မဟုတ်ပါဘူး။ Google မှာ Passive income tips ဆိုပြီးရှာလိုက်ရင် tips တွေထဲမှာ blogging ဆိုတာပါလာပါတယ်။ ဒီမှာပြောတဲ့ blogging ဆိုတာကို မြန်မာပြည်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ travel blogger တွေ၊ beauty blogger တွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ Website တွေပေါ်မှာရေးနေတဲ့ blogger တွေကိုပြောတာပါ။ (Youtuber တွေကိုလည်း…
Posted by aunghein — September 17, 2018 in Burmese Blog
Grammarly ဆိုတာက ကိုယ်ရေးနေတဲ့ English Language ဆောင်းပါးကို grammar တွေစစ်ပေးတာပါ။ အခုနောက်ပိုင်း ကျွန်တော် English language blogs တွေလုပ်ဖြစ်တော့ Grammarly က တော်တော်လေးအသုံးဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။ သူက ၃ မျိုးသုံးလို့ ရပါတယ်။ ပထမ တစ်မျိုးကတော့ www.grammarly.com website ထဲကိုဝင်ပြီး အကောင့်ဖွင့်ပြီး website ထဲမှာသုံးရမှာပါ။ grammarly website ထဲမှာ notepad ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ ဆောင်းပါးတွေရေးရင် Grammarly က instant စစ်ပေးပါတယ်။ အမှားတွေ့တာနဲ့တစ်ခါတည်း အနီရောင်တားပြီးပြပါတယ်။ ကိုယ်ရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးရဲ့ writing skill ကိုပါ…
Negative SEO ဆိုတာဘာလဲ???
Posted by aunghein — September 13, 2018 in Burmese Blog
SEO မှာ positive SEO ဆိုတာရှိသလို Negative SEO ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။ Postitive SEO ကတော့ ကိုယ့် website ကို ranking တက်အောင်တဲ့နည်းလမ်းတွေပေ့ါ။ ဒါဆို Negative SEO ကတော့ ဘာလုပ်တာလဲ။ တခြားသူရဲ့ website ကို ranking ကျအောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းပါ။ Black Hat နည်းလမ်းတွေသုံးပြီး rank ကောင်းနေတဲ့ website တစ်ခုကို ဆွဲချတာဖြစ်ပါတယ်။ Black Hat နည်းလမ်းဆိုပေမယ့် အချို…
Posted by aunghein — August 25, 2018 in Burmese Blog
Affiliate marketing ဆိုတာဘာလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို အလွယ်ဆုံးဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ အခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ ကုန်ပစ္စည်း၊၀န်ဆောင်မှုကို ကိုယ်က ကြော်ငြာရောင်းချပေးတာကိုဆိုလိုတာပါ။ အဲ့ဒီလိုရောင်းချခြင်းအားဖြင့် commision ရရှိပါတယ်။ Affiliate marketing ဟာ performance based marketing ဖြစ်ပါတယ်။ ကြော်ငြာပေးရုံနဲ့ကော်မရှင်မရပါဘူး။ တကယ်ရောင်းချရမှသာ ကော်မရှင်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် affiliated marketing လုပ်မယ့်သူဟာ ကြိုးစားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ Affiliate marketing ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုကြတဲ့သူတွေဟာ blogger တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Blogger တော်တော်များများရဲ့ ၀င်ငွေဟာ အများထင်သလို AdSense အပါအ၀င် Ads Network တွေကနေရရှိတာမဟုတ်ပဲ Affiliate marketing…